Maịka 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 Nke a bụ okwu Jehova nke ruru Maịka+ onye Moreshet ntị, nke a gwara ya n’ọhụụ banyere Sameria+ na Jeruselem+ n’oge ọchịchị Jotam,+ Ehaz,+ Hezekaya,+ bụ́ ndị eze Juda:+
2 “Geenụ ntị, ndị dị iche iche, unu niile; ṅaa ntị, gị ụwa na ihe jupụtara n’ime gị,+ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova bụrụ onye akaebe megide unu,+ ka Jehova si n’ụlọ ya dị nsọ gbagide unu akaebe.+
3 N’ihi na, lee! Jehova si n’ebe obibi ya na-apụta,+ ọ ga-agbadatakwa wee zọda ebe niile dị elu nke ụwa.+
4 Ugwu niile ga-agbaze n’okpuru ụkwụ ya,+ ndagwurugwu niile ga-agbawasị, dị ka mgbá aṅụ nke ọkụ gbazere,+ dị ka mmiri a wụpụrụ n’ebe kpọdara akpọda.
5 “Ọ bụ nnupụisi Jekọb mere ihe a niile ji na-eme, ọbụna n’ihi mmehie nke ụlọ Izrel.+ Gịnị bụ nnupụisi Jekọb? Ọ́ bụghị Sameria?+ Gịnịkwa bụ ebe ndị dị elu nke Juda?+ Ọ̀ bụ na ha abụghị Jeruselem?
6 M ga-emekwa ka Sameria bụrụ mkpọmkpọ ebe nke dị n’ọhịa,+ ebe a na-akọ ubi vaịn; m ga-awụbakwa nkume ya na ndagwurugwu, m ga-agbakwa ntọala ya ọtọ.+
7 A ga-akụrikwa ihe oyiyi ya a pịrị apị,+ kpọọkwa onyinye niile e ji kwụọ ya ụgwọ ọkụ;+ m ga-ebibikwa arụsị ya niile. N’ihi na o si n’ihe ọ gbatara n’akwụna nweta ha, ọ bụkwa n’ihe a gbatara n’akwụna ka ha ga-alaghachi.”+
8 N’ihi nke a, m ga-akwa ákwá arịrị, tiekwa mkpu ákwá;+ m ga-agba ụkwụ efu, gbarakwa ọtọ na-ejegharị.+ M ga na-eti mkpu dị ka nkịta ọhịa, na-erukwa uju dị ka nne enyí nnụnụ.
9 N’ihi na ọnyá dị ya n’ahụ́ adịghị ala ala;+ n’ihi na o rutewo Juda,+ ihe otiti ahụ erutewokwa n’ọnụ ụzọ ámá nke ndị m, ruo Jeruselem.+
10 “Unu akọla ya na Gat; unu akwala ákwá ma ọlị.+
“Tụrụọnụ n’ájá n’ụlọ Afra.+
11 Gị nwaanyị nke bi na Shefia, gbara ọtọ, jirikwa ihere si n’ala gị pụọ.+ Nwaanyị nke bi na Zeanan apụbeghị. Iti mkpu arịrị nke Bet-izel ga-anara unu ebe ọ ga-eguzo.
12 N’ihi na nwaanyị nke bi na Merọt echerewo ka o nweta ihe ọma,+ ma ihe ọjọọ esiwo n’ebe Jehova nọ bịakwasị ọnụ ụzọ ámá Jeruselem.+
13 Kegide ìgwè ịnyịnya n’ụgbọ, gị nwaanyị nke bi na Lekish.+ Ọ bụụrụ ada bụ́ Zayọn mmalite mmehie,+ n’ihi na ọ bụ n’ime gị ka a hụrụ nnupụisi Izrel.+
14 Ị ga-enye Moreshet-gat onyinye ọ ga-eji lawa.+ Ụlọ niile dị n’Akzib+ bụụrụ ndị eze Izrel ihe aghụghọ.
15 M ga-ezitere gị onye ga-anapụ gị ihe onwunwe gị,+ gị nwaanyị nke bi na Marisha.+ Ebube Izrel ga-eru Adọlam.+
16 Mee onwe gị isi nkwọcha, kpụchapụ ntutu gị n’ihi ụmụ gị ndị na-eme gị obi ụtọ nke ukwuu.+ Mee ka isi nkwọcha gị sakwuo mbara dị ka nke udele,* n’ihi na e siwo n’ebe ị nọ dọrọ ha n’agha.”+
^ Maị 1:16*
Okwu Hibru a nwekwara ike ịpụta ugo.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D33%26Chapter%3D1%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl